Kitra – Caf sy ny Coronavuris: tsy raikitra ny lalaon’ny Barea sy i Cote d’Ivoire | NewsMada
Kitra – Caf sy ny Coronavuris: tsy raikitra ny lalaon’ny Barea sy i Cote d’Ivoire
Par Taratra sur 14/03/2020
Mandalo fotoan-tsarotra ny kitra afrikanina raha efa nisedra izany ny any Eoropa. Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny Kaonefederasion’ny baolina kitra aty Afrika (Caf), omaly, fa miova avokoa ny fandaharan-dalao efa voalahatra.
Nandinika sy nijery ny zava-misy manoloana ny fihanaky ny valanaretina Coronavirus hatraty Afrika ny eo anivon’ny Caf, omaly hariva. Tapaka tamin’izany fa ahemotra ho amin’ny fotoana manaraka ary hampahafantarina miandalana eo ihany ny fandaharan-dalao rehetra momba ny fifanintsanan’ny Can 2021, hatao any Kameronina. Tafiditra ao anatin’izany ny lalao mandroso sy miverina eo amin’ny Barea sy ny Elefanta Ivorianina, tokony hatao ny 27 sy ny 31 marsa izao. Midika izany fa tsy raikitra amin’ireo daty efa voafaritra ireo ny fihaonan’ny roa tonta.
Araka izany, nampisavoritaka tanteraka ny tontolon’ny baolina kitra maneran-tany, ilay valanaretina “coronavirus”. Voakasik’izany koa ny Barea sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire. Samy manana mpilalao mila ravinahitra any amin’ireo firenena ahitana ity valanaretina ity ny roa tonta.
Metanire sy i Hery Bastien
Anisan’izany i Romain Metanire, milalao any Minesota, Etazonia. Nanambara ny filoha amerikanina, i Donald Trump, fa mikatona amin’ireo firenen-drehetra i Etazonia, ho fisorohana ny Coronavirus. Teo koa ny momba an’i Hery Bastien, milalao ao amin’ny Lienfield, any Irlande Avaratra. Misy mpilalao iray miaraka aminy voatily, nahitana viriosin’io areti-mandoza io. Nandray fanapahan-kevitra ny tompon’andraikitry ny klioba, ilalaovany ka tsy mamela ireo mpilalaony hivoaka ny faritra misy azy.
Tsy mbola fantatra ihany koa ny amin’ireo mpilalao malagasy, any Arabia Saodita sy ny any Frantsa, na omen’ny mpitantana ny ekipany fahazoan-dalana hamonjy ny Barea na tsia. Marihina fa tsy ny Barea irery no azon’izao tranga izao fa eo koa ry zareo Elefantan’i Côte d’Ivoire. Ohatra, i Gervinho, milalao any Italia, anisan’ireo firenena tena voa mafy amin’io valanaretina io.
Tompondaka sy Synèse R.